नेपाली बिस्कुट उत्पादनमा नेबिकोको प्रवेश र अहिलेकाे बिस्कुट बजार-Setoghar
अहिले नेपाली बजारमा करिब ३५ ओटा बिस्कुट उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । यी सबै उद्योगमा गरी करिब १२ देखि १३ अर्ब हाराहारीमा लगानी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस मध्ये नेपाली बिस्कुट उद्योगहरुको हिस्सा करिब ७ अर्ब रकम रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । करिब आधा बजार नेपाली उत्पाादनले लिएका छन् । यद्यपि नेपाली बिस्कुट उद्योगहरुको लागि अहिले पनि आयातित बिस्कुट नेपाली उद्योगको निम्ति ठूलो चुनौती बनेको छ ।
वि.सं २०२१ मा नेपाल बिस्कुट कम्पनीको स्थापना भएको हो । पछि त्यसै कम्पनीको नाम परिवर्तन गरिएपश्चात हाल सम्म सोही उद्योग नेविको प्रा.लि.को नाममा प्रख्यात रहँदै आएको छ । नेबिको प्रा.लि.शुरुका दिनमा गोरख बहादुर श्रेष्ठ, मोहन्तलाल श्रेष्ठ र पद्वानी सादन्त वैद्य गरी ३ जना व्यक्तिहरुको अगुवाइमा शुरुवात भएको हो । ऊहाँहरु सबैजना काठमाडौंका स्थानीय बासिन्दा तथा पुराना व्यवसायीको रुपमा परिचित व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । नेपालमा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न हुनुको अलावा ऊहाँहरुले भारत लगायतका विभिन्न ठाउँहरुबाट बिस्कुट आयात गर्दै आउनुभएका ऊहाँहरुले उद्योग सञ्चालन गनुपूर्व हाते मेसिनबाट बिस्कुट उत्पादन कार्य समेत गर्दै आउनुभएको थियो । साथै मेसिनको उपयोग गरेर बिस्कुट उत्पादन गर्ने नेपालको पहिलो कम्पनीको श्रेय समेत नेबिकोलाई नै जान्छ ।
गुणस्तरीयता निरन्तर प्रतिवद्धता
नेपालमा पहिलो पटक बिस्कुट उत्पादन गर्ने क्रममा आवश्यकता बमोजिमका आधुनिक मेसिनहरु जर्मनबाट आयात गरिएको थियो । नेपालमा नै बिस्कुटहरु उत्पादन कार्य शुरुवात भएपश्चात् यस कम्पनीले विभिन्न भेराइटीमा बिस्कुट उत्पादन गर्न थाल्यो । साथै यस कम्पनीको यसको कारोबार तथा बजार दायरा समेत बढ्दै गयो । समय–समयमा विभिन्न उतारचढावहरु आए । यद्यपि नेपालको पहिलो बिस्कुट उद्योगको हैसियतको अलावा सेवाग्राहीको चाहना र विश्वासलाई समेत मध्यनजर गर्दै यस कम्पनीले कहिल्यै पनि आफ्ना सेवाको गुणस्तरीयतामा सम्झौता गरेको छैन । आफ्नो गुणस्तर मापदण्ड बमोजिमकै सर्तमा नै यस कम्पनीले सम्भव भएसम्म आफ्ना उत्पादनलाई निरन्तरता नै दिँदै गयो । यद्यपि विभिन्न प्रतिकुल परिस्थितिमा बजारमा आवश्यक कच्चा पदार्थहरु उपलब्ध हुन उत्पादन प्लान्ट नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि नेविकाले धेरैपटक सामना गरेको छ ।
शुरुका दिनमा कम्पनी केन्द्रित
शुरुका दिनमा काठमाडौंको बजारलाई नै केन्द्रित गरेको यस कम्पनीले समयक्रम अनुसार पुर्वाञ्चल, पोखरा, नारायणघाट लगायतका क्षेत्रहरुमा समेत आफ्ना उत्पादनको बजार विस्तार गर्दै गयो । यद्यपि सहज सडक पहुँच नभएको कारण व्यवसायीहरु आफैं काठमाडौंमा आएर नेबिकोबाट उत्पादित प्रडक्टहरु लिएर जाने अवस्था थियो । सहज रुपमा सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै अहिले ढुवानी निकै सहज भएको छ । जसले गर्दा नेबिकाबाट उत्पादित बिस्कुट तथा चक्लेटहरु अहिले नेपालका सबै क्षेत्रका ग्रामीण बस्तिहरुमा पुगेका छन् ।
नेबिको ५५ औं बर्षे यात्रामा
नेबिकोले भर्खरै ५५ औं बर्षमा पाइला टेकेको छ । अहिले सम्म आइपुग्दा कम्पनीका बिस्कुट तथा चक्लेटहरु गरी ५५ भन्दा बढी प्रडक्टहरु बजारमा छन् । यी उत्पादनहरु मध्ये सबैजसोले उपभोक्ता माझ पृथक पहिचान बनाउन सफल छन् । यो कम्पनी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत निरन्तर रुपमा सचेत रहँदै आएको छ । कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरुमा विशेष सचेतना अपनाउँदै आएको र बजार सम्भावनाको सूक्ष्म अध्ययन गरी उपभोक्ताको चाहना बमोजिमका प्रडक्टहरु बजारमा ल्याउने भएकै कारण अहिले पनि यो कम्पनी स्वदेशी बिस्कुट उत्पादनमा अग्र स्थानमा रहन सफल भएको छ । नेबिको पश्चात् बजारमा आएका थुप्रै बिस्कुट कम्पनीहरु ढिलोछिटो बन्द पनि भएका छन् । यद्यपि नेपाली बजारमा नेबिकोले अहिले पनि ग्राहकहरुको राम्रो माया पाउन सफल छ ।
प्रतिष्पर्धि बजारमा अब्बल पहिचान यसरी सम्भव भएको हो
प्रतिष्पर्धी बजारमा कुनै पनि उत्पादन बजारमा ल्याएपश्चात् बजारमा निरन्तर आफ्नो अवस्थालाई कायम राखिरहनु त्यति सहज नहुन सक्छ । यसको लागि बजार के चाहन्छ ? उपभोक्ताको रुचि कसरी परिवर्तन भइरहेको छ ? आगामी सम्भावना के छन् भन्ने लगायतका कुराहरुमा समेत विशेष सचेत बन्नु जरुरी रहन्छ । रुपमा टिकिरहन विश्वबजारमा विकास भएका आधुनिक प्रविधिलाई समेत आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीबमोजिम नेविकोले आफ्ना उत्पादनहरुमा गुणस्तरीयता कायम गर्न अपनाउनुपर्ने सबै तौरतरिकाहरु अपनाउँदै आएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई समेत विशेष जोड दिँदै रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टमा समेत यस कम्पनीले निकै ठूलो रकम लगानी गरेको छ । नयाँ प्रडक्ट बजारमा ल्याउने क्रममा नेपालमा सम्भव नभए विदेशबाट विज्ञहरुलाई भित्र्याएर समेत आफ्नो गुणस्तरीयतामा सन्तुलन ल्याउन पहल गरिँदै आइएको छ ।
अहिले नेपाली बजारमा करिब १० हजार व्यक्तिहरुले बिस्कुट उत्पादन तथा बजारीकरणको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । यसैगरी करिब १० हजारकै सङ्ख्यामा चिनी, मैदा तथा अन्य कच्चा पदार्थहरुको क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा बिस्कुट बजार
अहिले नेपालका सबै क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच विस्तार गरिसकेको नेबिकोको पहुँच निकै राम्रो छ । ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा समेत उपभोक्तालाई सहज हुने गरी उत्पादनहरु उपलब्ध गराएको यस कम्पनीले सबै क्षेत्रबाट मुनाफाको मात्रै उद्धेश्य नलिई ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरुले सहज रुपमा विस्कुट उपयोग गर्न सकुन् भन्ने कुरामा समेत यो कम्पनी सचेत छ ।
सबै वर्गलाई लक्षित
कुनै पनि उत्पादनको गुणस्तरमा कमी नल्याई आफ्ना उत्पादनमा उत्कृष्टता ल्याउने पहल गर्दै आएको यस कम्पनीले विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर आफ्ना उत्पादनहरु बजारमा पठाएको छ । केही उत्पादनहरु विरामीलाई समेत लक्षित गरी बजारमा उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । सोहीबमोजिम अस्पतालमा उपचार गराइरहेका विरामीलाई समेत डाक्टरहरुले खाजाको रुपमा कालो चिया सँग नेबिकोबाट उत्पादित विभिन्न बिस्कुटहरु लिन परामर्श दिनुहुन्छ । यसलाई समेत कम्पनीले आफ्नो सफलताको रुपमा नै लिएको छ ।
हाल यस कम्पनीले करिब ३० करोड रकम लगानी गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा कम्पनीले स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरु मध्ये करिब १२ देखि १५ प्रतिशत सम्मको बजार हिस्सा ओगट्न सफल भएको छ भने समग्र नेपाली बिस्कुट बजार मध्ये छिट्टै करिब १० प्रतिशत सम्म आफ्नो पहुँच बिस्तार गर्ने योजना सहित यो कम्पनीले आफ्ना गतिविधिहरु अघी बढाइरहेको छ ।
नेबिकोका आगामी योजना
हाल करिब ५ सय व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको यस कम्पनीले भर्खर मात्रै नेबिको भैरहवा प्रा.लि. समेत यस कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको छ । अबको १ बर्षमा नै हेटौंडामा समेत नयाँ कम्पनी सञ्चालनको योजना सहित कम्पनीले गतिविधिहरुलाई तीव्रता दिएको छ ।
रिसर्च, प्रयोगशाला र बजारीकरणमा उत्कृष्ट कम्पनी
नेपालका विस्कुट उद्योग मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट गुणस्तरमा विस्कुट उत्पादन गर्ने र अत्याधुनिक सुविधायुक्त प्रयोगशालाको व्यवस्था रहेको यस नेबिकोले उत्पादन गर्ने वस्तुहरु सबै वस्तुहरु पहिले राम्रो तवरले परीक्षण गरेर मात्र व्यावसायिक तवरले उत्पादन गर्दै आएको छ । बजारका विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थहरुमा समेत गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता गरेर मात्रै वस्तु उत्पादनमा जोड दिएको कारण कम्पनीले लिएको लक्ष्य बमोजिम सफलता हासिल गर्न यो कम्पनी सफल हुँदै आएको छ । हाल रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट, क्वालिटी कन्ट्रोल र बजार व्यवस्थापनको लागि अरुण पौडेल, राजेन्द्र भट्टराई, प्रकाश कार्की, विमल वर्तौला र केशव भट्टराई लगायतका व्यक्तिहरु निरन्तर खटिइरहनुभएको छ ।
जनयुद्ध पश्चात् तीव्र गतिमा
नेपालमा जनयुद्ध कालमा नेपालका सबै उद्योगहरुको अवस्था तुलनात्मक रुपमा कमजोर बन्न पुग्यो । त्यसको असर नेबिकोलाई पनि प¥यो । यद्यपि कम्पनीको नेतृत्व नयाँ व्यवस्थापनले लिएपश्चात् २०६५ भन्दा पछाडि यस कम्पनीले तुलनात्मक रुपमा अझ द्रुत गतिमा आफ्ना गतिविधिहरु अघी बढाइरहेको छ ।
बिस्कुट उद्योगका अन्य समस्याहरु
अहिले नेपालमा कच्चा पदार्थहरुको उपलब्धता नेपाली बिस्कुट उद्योगको लागि चुनौतीको रुपमा रहँदै आएका छन् । खासगरी नेपाली विस्कुट उद्योगको लागि घ्यू र फ्लेवरको अलावा आवश्यकता अनुसार मैदा र चिनीको निम्ति समेत हामी आयातमा नै निर्भर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । विस्कुट उत्पादनको निम्ति आवश्यक पर्ने करिब ९० प्रतिशत सामाग्रीहरु भने नेबिकोले स्वदेशी नै प्रयोग गर्दै आएको छ ।
यसैगरी नेपालमा धूलो दूधको समेत उपलब्धतामा समेत समस्या रहने गरेको छ । अहिले नेपालमा धूलो दूध उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु २ ओटा छन् । एउटा डिडिसी हो भने अर्को सुजल डेरी । चितवन मिल्कले समेत धूलो दूध उपलब्ध गराउँदै आएकोमा हाल यो कम्पनी बन्द अवस्थामा छ । अहिले नेपालमा धुलो दूधको उपलब्धता छैन । तर बाहिरबाट धूलो दूध उपलब्ध गराउन समेत दिइएको छैन । हिउँदको समयमा प्राकृतिक दूध नै उपलब्ध हुने भएपनि बर्षायाममा भने नेपालका डेरीले समेत धूलो दूधबाट नै दूध उत्पादन गर्नुपर्ने भएको कारण नेपाली बजारमा उद्योगको निम्ति आवश्यकता बमोजिम धूलो दूध उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ । यसैगरी विस्कुट उद्योगहरुको लागि आवश्यक परिमाणमा गहुँ समेत प्रयाप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
कम्पनीका आगामी योजना
अब करिब ६ महिनामा नयाँ कुकिज उत्पादन गर्ने योजनामा छ नेबिको । यसैगरी १ बर्ष भित्रमा हेटौडाको नयाँ कम्पनीबाट चक्लेट र ललिपप उत्पादनको योजना बनाइएको छ । साथै आगामी दिनमा नेबिको विस्कुटको अलावा अन्य वस्तु उत्पादनमा समेत विकेन्द्रित हुँदैछ । अहिले पनि यस कम्पनीको भगिनी संस्था मार्फत तार्लेट जाम (चक्लेट जाम)लाई स्पेनबाट आयात गरेर बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसैगरी बजारमा नयाँ चक्लेट र ठूलो साइडका विस्कुटहरु (फ्याम्ली प्याक) बजारमा ल्याउने योजना छ ।